CASES | Fitaovana masinina Meixin
Manana traikefa mihoatra ny 15 taona amin'ny famokarana milina fanamainty sy milina fanapuana.
Wooden base Flat borosy Machine namboarin'ny MEIXIN nanamboatra PZ-18
fototry ny hazo, Rava tokana, araky ny takian'ny mpanjifa Filament ivelan'ny lavaka.
India phool jhadu milina fanaovana makia-trano - CNC tsy misy lalovov-fanaovana vovoka MAKINGA MACHINE
Ny trano ataontsika JIANGMEN MEIXIN COMB BRUSH MACHINERY CO., LIMITED izay manam-pahaizana manokana amin'ny fanamboarana lakana sy borosy. Izahay dia manamboatra teknolojia avo lenta ary manana traikefa tsara amin'ity andalana ity izay efa afaka 30 ans mahery. Azonao atao ny manatratra ny anaran'ny vokatrao. Toy ny hoe tsy misy milina vovoka. Milina fanamboarana vovoka mandeha ho azy. Fitaovana feno milina fanenonan-damba India India Phool Jhadu. India phool jhadu milina fanaovana makia-trano - CNC tsy misy lalovov-fanaovana vovoka MAKINGA MACHINE.
Masinina fitaterana vy ho an'ny borosy Flat vita amin'ny MEIXIN nanamboatra PZ-03
Ny fampivoarana FMX dia mamela ny fanovana haingana ho an'ny famokarana barazy vaovao. Ity feo malefaka 3 axis cnc FAN BROOM milina ity amin'ny fanaovana borosy amin'ny 2 grippers.
Masinina borosy mihodina vita amin'ny MEIXIN manamboatra PZ-02
Ny orinasa izahay dia manokana amin'ny famokarana milina 2 na 5 tokana (roa) fametahana loko, milina fanaovana asa vita amin'ny vatan'ny CNC, milina fandroana sy milina CNC, milina mitambatra sy milina fanodinana CNC, milina fanorenam-bidy, milina fanoratana filamatra. dia ampiasaina betsaka amin'ny karazana borosy, ohatra: fako (plastika sy hazo) fanadiovana, borosy elektrika, borosy nivezivezy, borosy kosmetika, borosy boribory, boriborintany roller, borosy, borosy boribory, borosy fanasana, lovia , borosy hazo sy ny sisa.